कथा : आमाको मायाको कुनै सिमा हुँदैन - एक पटक अवश्य पढ्नुहोला ( भिडियोसहित ) - ज्ञानविज्ञान
जे होस् आमाको लागि उस्को माया नै ठूलो रह्यो । आमाको माया भन्दा ठूलो कुनै कुरा पनि यो संसारमा छैन् । धनी र गरिबको चुंगलमा होईन् । आमाको माया निस्वार्थ र सधै सकारात्मक सोच भएकै कारण आज हामी यो धर्तीमा उभिन पाएका छौं । आमालाई कुनै शब्दमा बयान गर्न सकिदैन् । आमाको माया अपरम्पारे छ । त्यसैले आमाको सम्मान गरौं ।
Don't Miss it जपानीहरु धेरै बाच्नुको रहस्य के हो ? के हामी पनि लामो समय बाच्न सक्छौ त ? थाहापाउनुहोस्
Up Next महिलामा किन बढी देखिन्छ ढाडको बाथ रोग ? यस्ता छन् यसका लक्षण र बच्ने उपाय